China umsi kunye neRotary retort mveliso kunye nabenzi | Dingtaisheng
Beka imveliso kwi-retortic retort, iisilinda zixinaniswe ngokukodwa kwaye zivale ucango. Umnyango wokubuyisa ukhuselekile ngokudibanisa ukhuseleko kathathu. Kuyo yonke le nkqubo, umnyango utshixiwe ngoomatshini.
Amanzi ashushu afakwe ngaphakathi kugqatso ngetanki lamanzi ashushu, umoya obandayo kwindawo evalelweyo uyakhutshwa, emva koko umphunga utofelwe ngaphezulu kwe-retort, indawo yokungena komphunga kunye nomsele ungqamene nendawo, igcwele umphunga. Emva kokuba onke amanzi ashushu ekhutshiweyo, iyaqhubeka nokufudumeza ukufikelela kubushushu boxinzelelo. Akukho ndawo ibandayo kuyo yonke inkqubo yokuvala inzala. Emva kokuba ixesha lokuvalwa lifikile, amanzi okupholisa angene kunye nokuqala kwenqanaba lokupholisa, kwaye uxinzelelo kwindawo yokubuyisa lilawulwa ngokufanelekileyo ngexesha lokupholisa ukuqinisekisa ukuba iinkonkxa azizukukhubazeka ngenxa yomahluko phakathi koxinzelelo lwangaphakathi nolwangaphandle.
Kwindawo yokufudumeza kunye nokubamba, uxinzelelo kwi-retort lwenziwa ngokupheleleyo luxinzelelo lwe-steam. Xa iqondo lobushushu lehlile, uxinzelelo lokubala lwenziwa ukuqinisekisa ukuba ukupakishwa kwemveliso akunakukhubazeka.
Ngexesha lonke le nkqubo, isantya sokujikeleza kunye nexesha lomzimba ojikelezayo limiselwa yinkqubo yokuvalwa kwemveliso.
Ukuhanjiswa kobushushu okungafaniyo
Ngokususa umoya kwisitya se-retort kufezekisiwe. Ke ngoko, ekupheleni kwenqanaba lokungena kwomoya, iqondo lobushushu kwinqanawa lifikelela kwimeko efanayo.
Thobela isiqinisekiso se-FDA / USDA
Ilula kwaye ithembekile
Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokucoca inzalo, akukho ndlela yimbi yokufudumeza inqanaba lokuza kunye nokuzala, kungoko kuphela umphunga ekufuneka ulawulwe ukwenza ibhetshi yeemveliso zingaguquguquki. I-FDA ichaze uyilo kunye nokusebenza kwe-steam retort ngokweenkcukacha, kwaye uninzi lwee-canneries ezindala bezisebenzisa, ke abathengi bayazi umgaqo osebenzayo wolu hlobo lwe-retort, okwenza ukuba olu hlobo lokuphindisela lube lula kubasebenzisi bakudala ukuba bamkele.
Inkqubo ejikelezayo inesakhiwo esilula kunye nokusebenza okuzinzileyo
> Isakhiwo esijikelezayo somzimba senziwa kwaye senziwe ngexesha, kwaye unyango olulungeleleneyo lwenziwa ukuqinisekisa ukuzinza kokujikeleza
> Inkqubo ye-roller isebenzisa isixhobo sangaphandle xa sisonke. Isakhiwo silula, kulula ukusigcina, kwaye sandise kakhulu ubomi benkonzo.
> Inkqubo yokucinezela yamkela iisilinda ezibini ezahlulahlula ngokuzenzekelayo kwaye zihambelane, kwaye isakhiwo sesikhokelo sigxininisiwe ukongeza ubomi benkonzo yesilinda.
Igama: I-Rotary retort, i-retort, Umgca wokuvelisa inzala
Iziselo (iprotein yemifuno, iti, ikofu)
Products Iimveliso zobisi
＞ Imifuno kunye neziqhamo (amakhowa, imifuno, iimbotyi)
Food Ukutya kwabantwana
Y Ukulungele ukutya ukutya, isidudu
Egqithileyo Ukuntywiliselwa kwaManzi kunye nokuQina kokujikeleza
Okulandelayo: Inkqubo yeRortal Retort System
Ukujikeleza kweRotary Retort
Ukujikeleza kweRotary Retorts
Ukuntywiliselwa kweRotary Autoclave Retort
Ukujikeleza kwamanzi ngokujikeleza iRotary